अन्तमा मत्ती २ 24, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
यो गलत प्रसpret्गलाई हटाउन महत्त्वपूर्ण छ, मत्ती २ 24 लाई ठूलो सन्दर्भमा (प्रसंग) अघिल्लो अध्यायहरूको। तपाईं मत्ती २ 24 को इतिहास अध्याय १, को पछिल्लो पद २१ मा सुरु हुन्छ भनेर जान्न चकित हुनुहुनेछ। यसमा सारांशमा भनिएको छ: "त्यस समयदेखि यूसुफले आफ्ना चेलाहरूलाई यरूशलेम कसरी जाने र एल्डरहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले धेरै यातना भोग्नुपर्‍यो र मारिनुपर्‍यो र तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुने कुरा देखाउन थाल्‍यो।" यसबाट, येशूले केहि चीजको पहिलो चिन्ह दिनुहुन्छ जुन चेलाहरूको नजरमा येशू र यरूशलेमका धार्मिक अधिकारीहरूबीच बलको एक प्राथमिक परीक्षा जस्तो देखिन्थ्यो। यरूशलेम जाने बाटोमा (२०: १-20,17-१-19) उहाँ तिनीहरूलाई यस आउँदै गरेको द्वन्द्वको लागि तयार गर्न जारी राख्नुहुन्छ।
दु: खको पहिलो घोषणाको समयमा, येशूले तीन चेलाहरू पत्रुस, याकूब र यूहन्नालाई अग्लो डाँडामा लगनुभयो। त्यहाँ तिनीहरूले रूप परिवर्तन अनुभव गरे (17,1-13)। यसका लागि चेलाहरूले आफैलाई सोध्नुपरेको छ कि परमेश्वरको राज्यको स्थापना नजिकै नहुन सक्छ कि? (17,10-12)।
येशूले बाह्र सिंहासनहरूमा बस्नुहुनेछ र "मानिसका पुत्र आफ्ना महिमाको सिंहासनमा बस्नुहुनेछ" तब इस्राएलको न्याय गर्नेछ भनेर चेलाहरूलाई थप घोषणा गर्नुभयो। (19,28)। निस्सन्देह, यसले फेरि परमेश्वरको राज्यको “कहिले” र “कसरी” भन्ने प्रश्नहरू खडा गरे। राज्यको बारेमा येशूको कुराकानीले याकूब र यूहन्नाकी आमालाई पनि आफ्ना दुई छोराहरूलाई राज्यमा विशेष ओहदा दिन आग्रह गर्न लगायो। (20,20-21)।
त्यसपछि यरूशलेममा विजयी प्रवेश भयो जुन गधामा येशू शहरभित्र पस्नुभयो (21,1-11)। फलस्वरूप, मत्तीको अनुसार, मसीहको सम्बन्धमा देखिने जकरियाको भविष्यवाणी पूरा भयो। येशू आइपुग्नुभयो भने के हुन्छ होला भनेर त्यस शहरका सबै शहरहरू यसै ठाउँमा छक्क परेका थिए। जेरूसलेममा उनले पैसा परिवर्तन गर्ने टेबललाई पल्टाइदिए र थप कार्यहरू र चमत्कारहरू मार्फत आफ्नो मसीहको शक्ति प्रदर्शन गरे (21,12-27)। "को हो?" मानिसहरू छक्क परे (21,10)।
त्यसपछि २१:21,43 मा येशूले मुख्य पुजारीहरू र एल्डरहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो: "यसकारण म तिमीलाई भन्छु: परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ र त्यहाँ फल फलाउने मानिसहरूलाई दिइनेछ।" उनका श्रोताहरूलाई थाहा थियो कि उहाँ उनीहरूको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। येशूको यो भनाइलाई उनले आफ्नो मसीही साम्राज्य स्थापना गर्न लागेका थिए भन्ने संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ तर धार्मिक "स्थापना" लाई यसबाट अलग गर्नुपर्दछ।
साम्राज्य निर्माण हुनेछ?
यो कुरा सुनेर चेलाहरू अचम्मित भए होलान। के येशू तुरुन्तै आफूलाई मसीह भन्नु चाहनुहुन्थ्यो? के उनी रोमी अधिकारीहरूसित लडिरहेका थिए? के उसले परमेश्वरको राज्य ल्याउनेवाला थियो? के त्यहाँ युद्ध हुने थियो र यरूशलेम र मन्दिरलाई के हुनेछ?
अब हामी मत्ती २२ को पद १ 22 मा आउँछौं। यो ठाउँ त्यहीं देखिन्छ जहाँ यस कर फरिसीहरूद्वारा शुरू हुन्छ जहाँ येशूलाई करको सवालमा पासोमा पार्न चाहन्छन्। उनका उत्तरहरू लिएर तिनीहरू उनलाई रोमी अधिकारीहरूको विद्रोहको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थे। तर येशूले बुद्धिको जवाफ दिनुभयो र तिनीहरूको योजना असफल भयो।
Am selben Tag hatten auch die Sadduzäer eine Auseinandersetzung mit Jesus (22,23-32)। उनीहरूले पुनरुत्थानमा विश्वास गरेनन् र उनलाई एउटै महिलालाई क्रमिक रूपमा विवाह गरेका सात दाइहरूको बारेमा छलपूर्ण प्रश्न सोधे। उनको पुनरुत्थानमा को को स्वास्नी हुनुपर्छ? येशूले अप्रत्यक्ष जवाफ दिनुभयो र भन्‍नुभयो कि उनीहरू आफैले धर्मशास्त्रहरू बुझेनन्। उनले रीकमा विवाह नभएको भन्दै उनलाई अलमल्लमा पारे।
तब अन्तमा, फरिसीहरू र सदुकीहरूले तिनलाई व्यवस्थाको सब भन्दा उच्च आज्ञाको बारेमा प्रश्न सोधे (22,36)। उनले लेवी १ :3: १ and र व्यवस्था 19,18.। उद्धृत गर्दै बुद्धिमानी जवाफ दिए। र एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो: मसीह कसको छोरो हुनु पर्छ? (२२..22,42२)? त्यसो भए उनीहरू चुपचाप बस्नुपर्‍यो; «कसैले पनि एक शब्दको जवाफ दिन सकेन, न कोही उसलाई त्यस दिनदेखि सोध्ने हिम्मत गरे day (22,46)।
अध्याय २ मा शास्त्री र फरिसीहरू विरुद्ध येशूले चलाएको औंल्याउँछ। अध्यायको अन्ततिर, येशूले उनीहरूलाई "भविष्यवक्ताहरू र agesषिमुनियों र शास्त्रीहरू" पठाउने घोषणा गर्नुभयो र उनीहरू मार्ने, क्रूसमा टाँगेको, फ्ल्याग्लेट र सतावट दिने भविष्यवाणी गर्नुभयो। ती सबै अगमवक्ताहरू तिनीहरूको काँधमा मरे। स्पष्टतः तनाव बढ्दै गइरहेको छ र चेलाहरूले यी द्वन्द्वहरूको महत्त्व के हुन सक्छ भनेर सोच्नुपर्दछ। के येशूले मसीहको रूपमा शक्ति लिइरहनुभएको थियो?
तब येशूले प्रार्थनामा यरूशलेमलाई सम्बोधन गर्नुभयो र भविष्यवाणी गर्नुभयो कि उनीहरूको घर "उजाड हुनेछ"। यो अचम्मको टिप्पणी पछि हुन्छ: "किनकि म तिमीलाई भन्छु: अब उप्रान्त तपाईंले मलाई देख्नुहुने छैन जबसम्म तपाईं यसो भन्नुहुन्न: प्रभुको नाममा आउने धन्यको हो!" (२ 23,38: 39- पढ्नुहोस्) येशूका कुराबारे चेलाहरू अलमल्ल परे र डरलाग्दो प्रश्नहरू गरेको हुनुपर्छ। के उसले आफैंलाई बयान गरिरहेको थियो?
भविष्यवाणी गरिएको मन्दिर विनाश
यसपछि येशू मन्दिर छोडेर जानुभयो। उहाँ बाहिर जाँदै गर्दा, उहाँको सास फेर्ने चेलाहरूले मन्दिरको भवनहरू देखाए। मार्कसको साथ उनीहरू भन्छन्: "मास्टर, हेर्नुहोस् ढु stones्गा र कुन भवनहरू!" (13,1)। लूका लेख्छन् कि चेलाहरू "सुन्दर ढु stones्गा र रत्नहरू" देखेर छक्क परे (21,5)।
चेलाहरूको हृदयमा के भएको हुनुपर्छ विचार गर्नुहोस्। यरूशलेमको विनाशबारे र धार्मिक अख्तियारवालाहरूसँगको युद्धको सम्बन्धमा येशूको भनाइबाट चेलाहरू डराए र उत्साहित भए। तपाईंले यहूदी धर्म र यसको संस्थाको पतनबारे किन कुरा गर्नुभयो होला भनेर तपाईंले सोचिरहनुभएको होला। के मसीह दुबैलाई सुदृढ पार्न आउनुहुन्न र? मन्दिरको बारेमा चेलाहरूको भनाइबाट एक अप्रत्यक्ष चिन्ता छ: के यस शक्तिशाली चर्चलाई हानि गर्नु पर्दैन र?
येशू तिनीहरूको आशा असफल पार्नुहुन्छ र तिनीहरूको डरलाग्दो भविष्यवाणीलाई अझ गाढा पार्नुहुन्छ। उनले मन्दिरबाट उनको प्रशंसा पन्छाए: "तपाईं यी सबै देख्नुहुन्न? साँच्‍चै, म तिमीलाई भन्‍दछु, अर्को ढु stone्गामाथि अर्को ढु stone्गा पनि बाँकी रहनेछैन। (24,2)। यसले चेलाहरूलाई गहिरो आघात प्रदान गर्नुपर्दछ। उनीहरूले विश्वास गरे कि मसीहले यरूशलेम र मन्दिरलाई जोगाउनुहुनेछ, यसलाई नाश गर्नुहुन्न। जब येशू यी कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तब चेलाहरूले मूर्तिपूजक शासनको अन्त्य र इस्राएलको महिमित उदयको बारेमा सोचेको हुनुपर्छ। दुबै हिब्रू धर्मशास्त्रमा धेरै पटक अगमवाणी गरिएको छ। उनीहरूलाई थाँहा थियो कि यी घटनाहरू "अन्तको समय", "अन्तिम पटक" मा हुनुपर्दछ (दानियल .8,17.१11,35; ११..40 र ;०; १२..12,4 र))। तब मसीह देखा पर्नेछन् वा परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्न "आउनुहोस्"। यसको मतलब यो हो कि इजरायल राष्ट्रिय आकारमा उत्रिनेछ र साम्राज्यको अगुवा हुने थियो।
त्यो कहिले हुन्छ?
येशू नै मसीह हुनुहुन्छ भनेर चिनेका चेलाहरूले स्वाभाविक रूपमा "अन्तको समय" आएको छ कि भनेर जान्न आग्रह गरे। त्यहाँ धेरै आशाहरू थिए जुन येशूले चाँडै नै आफू मसीह हुँ भनेर घोषणा गर्नुहुनेछ (यूहन्ना .2,12..18-) यसैले अचम्म मान्नुपर्दैन कि चेलाहरूले गुरुलाई उनले कसरी र कहिले "कहिले आए" बताउन आग्रह गरे।
जब येशू जैतून डाँडामा बसिरहनुभएको थियो, उत्साहित चेलाहरू उहाँकहाँ आए र गोप्य रूपमा केही "भित्री" जानकारी खोजिरहेका थिए। "हामीलाई भन्नुहोस्," तिनीहरूले सोधे, "यो कहिले हुनेछ? तपाईंको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? » (मत्ती २::)) उनीहरूले जान्न चाहेका थिए कि येशूले यरूशलेमको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएका कुराहरू कहिले हुनेछन् किनकि तिनीहरू पक्कै अन्तको दिन र उनको "आउने "सँग सम्बन्धित थिए।
जब चेलाहरूले "आउने" कुरा गर्छन्, उनीहरूको दिमागमा कुनै "दोस्रो" थिएन। तिनीहरूको धारणा अनुसार, मसीह आउनुपर्नेछ र चाँडै नै यरूशलेममा आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुपर्नेछ, र यो "सदाका लागि" रहनुपर्दछ। उनीहरूलाई "पहिलो" र "दोस्रो" आउँदै गरेको विभाजन थाहा थिएन।
मत्ती २ 24,3: in मा विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा, किनकि पद पूरै अध्याय २ 24 को सार हो। चेलाहरूको प्रश्न दोहोर्याउनुपर्दछ र इटालिकमा केही मुख्य शब्दहरू हुनुपर्दछ: "हामीलाई भन्नुहोस्," उनीहरूले सोधे, "कहिले हुन्छ? त्यो हुन्छ? तपाईंको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? » उनीहरूले जान्न चाहेका थिए कि येशूले यरूशलेमको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएका कुराहरू कहिले आउनेछ किनकि उनीहरूले उनीहरूलाई "संसारको अन्त" लाई जोडेका थिए। (ठ्याक्कै: विश्व समय, युगको अन्त्य) र यसको «आउँदै»।
चेलाहरूबाट तीन प्रश्नहरू
चेलाहरूले तीन प्रश्नहरू उठ्छन्। पहिले, तिनीहरू "त्यो" कहिले हुन्छ भनेर जान्न चाहन्थे। “यसको” अर्थ यरूशलेमको विनाश र मन्दिरको विनाश जसको येशूले भर्खरै भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। दोस्रो, तिनीहरू जान्न चाहन्थे कुन "चिन्ह" यसले आउने घोषणा गर्दछ; येशूले उनीहरूलाई पछि बोलाउनुहुन्छ, किनकि हामी अध्याय २ 24, पद 30० मा हेर्नेछौं। अनि तेस्रो, चेलाहरू "अन्त" कहिले जान्न चाहन्थे। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो कि तिनीहरूले यो जानेका थिएनन् (24,36)।
यदि हामी यी तीन प्रश्नहरू - र येशूका उत्तरहरू - लाई अलग हेर्छौं भने हामी आफैले मत्ती २ 24 मा सम्बन्धित समस्या र गलत अर्थहरूको एक पूरा श्रृंखला बचाउनेछौं। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यरूशलेम र मन्दिर बताउनुहुन्छ ("" ") वास्तवमै तिनीहरूको जीवनकालमा नष्ट हुने थियो। तर उनीहरूले "चिह्न" भनेको उनी आउँदैछन्, शहरको विनाशसँग सम्बन्धित छ। र तेस्रो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ कि कसैलाई पनि उसको फिर्ताको समय र विश्व समयको "अन्त्य" थाहा हुँदैन।
त्यसोभए मत्ती २ 24 मा तीन प्रश्न र येशूले दिने तीन अलग जवाफहरू। यी उत्तरहरूले चेलाहरूलाई सोध्ने प्रश्नहरूमा एक इकाई गठन गर्ने घटनाहरूलाई डिकूपेल गर्दछ र उनीहरूको अस्थायी सम्बन्धलाई काट्छ। येशूको आगमन र "संसारको अन्त" भविष्यमा हुन सक्छ, यरूशलेमको विनाशको बावजुद (AD० एडी) धेरै टाढा पछाडि छ।
मैले भनें, यसको मतलब यो होइन कि चेलाहरूले यरूशलेमको विनाशलाई “अन्त” भन्दा फरक ठाने। तिनीहरूले प्रायः त्यसो गरेनन्। र उनीहरूले पनि घटनाहरू छिट्टै हुने आशा गरे (ईश्वरशास्त्रीहरूसँग प्राविधिक शव्द "तत्काल अपेक्षा" छ)।
मत्ती २ 24 मा यी प्रश्नहरूको कसरी व्यवहार गरियो हेरौं। सबै भन्दा पहिले, हामी "अन्त" को परिस्थितिहरूको बारेमा कुरा गर्न येशूको कुनै खास चासो छैन जस्तो देखिन्छ। यो उहाँका चेलाहरू हो जसले ड्रिल गर्दछ, जसले प्रश्नहरू सोधे, र येशूले उनीहरूलाई जवाफ दिनुहुन्छ र केही स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ।
हामी यो पनि बुझ्दछौं कि "अन्त" को बारे मा चेलाहरूको प्रश्न सम्भवतः एक मूर्खता मा आधारित छ - कि घटनाहरू चाँडै हुनेछ, र एकै समयमा। अचम्मको कुरो त यो होइन कि तिनीहरू निकट भविष्यमा येशू मसीहको रूपमा आउनुहुनेछ भन्ने आशामा थिए जुन यो केही दिन वा हप्ताहरूमा हुन सक्छ। जे होस्, उनीहरूको पुष्टिकरणको लागि उसको आगमनको मूर्त "चिन्ह" चाहिएको थियो। यो पहल वा गोप्य ज्ञानको साथ, तिनीहरूले आफूलाई लाभदायी पदहरूमा राख्न चाहन्थे जब येशूले उहाँको कदम चाल्नुभयो।
यस सन्दर्भमा, हामीले मत्ती २ from का येशूका टिप्पणीहरू हेर्नुपर्दछ। चेलाहरूद्वारा छलफल सुरु हुन्छ। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि येशू शक्ति लिन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र "कहिले" जान्न चाहानुहुन्छ। तपाइँ एक तयारी साइन चाहानुहुन्छ। त्यसो गर्दा तिनीहरूले येशूको लक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा गलत अर्थ लगाए।
अन्त: अझै होईन
चेलाहरूका प्रश्नहरूको सीधा जवाफ दिनुको सट्टामा येशूले तिनीहरूलाई तीन महत्त्वपूर्ण शिक्षा सिकाउने मौका प्रयोग गर्नुभयो।
उनीहरूले सोध्ने परिदृश्य भोली चेलाहरूले सोचे भन्दा धेरै जटिल थियो।
जब येशू "आउनुहुनेछ" - वा हामी भन्दछौं: "फिर्ता आउ" - उनीहरूलाई थाहा थिएन।
चेलाहरूले "हेर्नुपर्दछ", हो, तर परमेश्वरसँगको उनीहरूको सम्बन्धमा अझ बढी ध्यान दिनुहोस् र स्थानीय वा विश्व घटनाहरूमा कम। यी सिद्धान्तहरू र अघिल्लो छलफललाई ध्यानमा राख्दै, अब यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि येशू आफ्ना चेलाहरूसँगको वार्तालाप कसरी विकसित हुन्छ। सबै भन्दा पहिले, त्यो उनको अन्त घटनाहरु जस्तो लाग्न सक्छ तर हुन सक्दैन कि घटनाहरु द्वारा मूर्ख नबनाउन चेतावनी दिन्छ (२,, --24) कठोर र विनाशकारी happen हुनु पर्छ »,« तर अन्त्य अझसम्म त्यहाँ छैन » (पद १ 6)
तब येशूले चेलाहरूलाई सतावट, अराजकता र मृत्युको घोषणा गर्नुभयो (24,9-13)। उनीहरू कत्ति डराउँथे होलान्! "सतावट र मृत्युको कुरा के हो?" तपाईंले सोचेको हुनुपर्छ उनीहरूले सोचे कि मसीहका अनुयायीहरूले विजय पाउनुपर्दछ र विजय पाउनुपर्दछ, काटिन र ध्वंश पार्नुहुन्न।
तब येशूले सारा संसारमा सुसमाचारको घोषणाको बारेमा कुरा गर्न थाल्नुभयो। त्यसोभए अन्त आउनै पर्छ (24,14)। यसले पनि चेलाहरूलाई अलमल्लमा पारेको हुनुपर्छ। उनीहरूले सोचेका थिए कि मसीह पहिले "आउनेछन्", त्यसपछि उसले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नेछ, र त्यसपछि मात्र प्रभुको सन्देश संसारमा जान्छ। (यशैया १:: १ 2,1-१-4)
यसपछि येशू घुमाउनुहुन्छ र मन्दिरको विनाशको बारेमा फेरि कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ "पवित्र स्थानमा उजाडको घृणण" हुनुपर्दछ र "त्यसपछि यहूदियाको डाँडाहरूमा भाग्नुपर्दछ"। (मत्ती १०: १ -24,15 -२०) यहूदीहरूमा अतुलनीय आतंक फुट्छ। "किनभने तब त यो एक ठूलो स be्कष्ट हुनेछ जुन संसारको शुरूदेखि अहिलेसम्म भएको छैन र फेरि कहिले पनि हुने छैन," येशू भन्नुहुन्छ। (24,21)। यो यति डरलाग्दो हुनुपर्दछ कि यदि कोही दिन बाँचेन भने यस दिनलाई छोट्याइएको थिएन।
जबकि येशूका शब्दहरू पनि विश्वव्यापी दृष्टिकोणमा छन्, उहाँ मुख्यतया यहूदिया र यरूशलेमको घटनाहरूको बारेमा बोल्नुहुन्छ। "किनकि देशभरि ठूलो कठिनाइ हुनेछ र यी मानिसहरूमाथि रीस आउनेछ," लूका भन्छन्, जसले येशूले भन्नुभएको कुराको प्रस out्ग प्रस्तुत गर्दछ। (लूका २१:२:21,23, एल्बेरफिल्ड बाइबल, सम्पादकहरूको जोडबाट)। मन्दिर, जेरूसलेम र यहूदिया, येशूको चेतावनीको केन्द्रबिन्दु हो, सम्पूर्ण संसारलाई होइन। येशूले भन्नुभएको सर्वनाशकारी चेतावनीले मुख्यतया यरूशलेम र यहूदियाका यहूदीहरूलाई जनाउँदछ। AD 66-70 को घटनाहरू। कि पुष्टि गरीएको छ।
भाग्नु - शबाथमा?
त्यसकारण यो अचम्म मान्नुपर्दैन कि येशू भन्नुहुन्छ: «तर तपाईंको उडान जाडोमा वा शबाथमा नहोस् भनेर सोध्नुहोस्» (मत्ती 24,20।।) अचम्म मान्नुपर्दछ: किन सब्बथलाई चर्चको अधीनमा राखिएको छैन भनेर येशूले विश्रामदिनको उल्लेख गर्नुभयो? अब इसाईहरूले सब्बथको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन, किन यसलाई यहाँ विशेष रूपमा बाधाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ? यहूदीहरू विश्वास गर्थे कि विश्राम दिनमा यात्रा निषेध गरिएको छ। तिनीहरूसँग सम्भवतः अधिकतम दूरीको एक उपाय पनि थियो जुन त्यस दिन कभर गर्न सकिन्छ, अर्थात् "शबाथ वाक" (प्रेरित १:)) लुकासका लागि, यो जैतुनको पर्वत र शहरको बीचको बीचमा मिल्दोजुल्दो छ (लूथर बाइबलको परिशिष्ट अनुसार यो २००० हातको थियो, करीव १ किलोमिटर)। तर पहाडहरूमा टाढा भाग्नु आवश्यक छ भनेर येशू भन्नुहुन्छ। एक "शबाथको पैदल यात्रा" ले तिनीहरूलाई जोखिम क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्दैन। येशू जान्नुहुन्छ कि आफ्ना श्रोताहरू विश्वास गर्छन् कि विश्राम दिनमा तिनीहरूले लामो उम्कने बाटोहरू लिनुहुन्न।
यसले उडानलाई विश्रामदिनमा नहोस् भनेर चेलाहरूलाई सोध्नुको कारण बताउँछ। यस अनुरोधलाई त्यस समयमा उनीहरूको मोशाको कानूनको बारेमा बुझ्नु पर्दथ्यो। हामी लगभग येशूको तर्कलाई सारांशमा यसरी व्याख्या गर्न सक्छौं: मलाई थाहा छ तपाईं शबाथको लामो यात्रामा विश्वास गर्नुहुन्न, र तपाईंले त्यसो गर्नुहुने छैन किनभने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि व्यवस्थाले यसको माग गर्दछ। यदि ती चीजहरू जो यरूशलेममा आउँदैछन् त्यो विश्रामको दिनमा खडा भयो भने, तपाईं तिनीहरूबाट भाग्नुहुनेछैन र तपाईं मृत्यु पाउनुहुनेछ। यसैले म भन्छु कि सब्बथमा भाग्नु नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्न म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु। किनभने तिनीहरू भाग्ने निर्णय गरे पनि, सामान्यतया यहूदी संसारमा व्याप्त यात्रा प्रतिबन्धहरू एक गाह्रो अवरोध थियो।
मैले भनें, हामी येशूका चेतावनीहरूको यस अंशलाई of० मा भएको यरूशलेमको विनाशसँग सम्बन्धित गर्न सक्छौं। यरूशलेमका यहूदी मसीहीहरू जसले अझै पनि मोशाको व्यवस्था पालन गरेका थिए (प्रेरित २१: १ 21,17-२26) प्रभावित हुनेछ र भाग्नु पर्ने थियो। तिनीहरू शबाथको व्यवस्थासँग विवेकको विवादमा पर्न सक्दछन् यदि त्यस दिन परिस्थितिबाट भाग्न आवश्यक परेको थियो।
अझै "चिन्ह" होईन
यसै बीचमा, येशूले आफ्नो भाषण जारी राख्नुभयो, जुन चाहिँ उहाँको आगमनको "कहिले" भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना चेलाहरूका तीन प्रश्नहरूको उत्तर दिने थियो। हामी देख्छौं कि अब सम्म उनले केवल तिनीहरूलाई सिद्धान्तमा व्याख्या गरेको छ जब ऊ आउँदैन। यसले विनाशलाई अलग गर्दछ जुन यरूशलेमलाई "चिन्ह" र "अन्तको आगमन" बाट प्रहार गर्दछ। यसबेला चेलाहरूले विश्वास गरेको हुनुपर्छ कि यरूशलेम र यहूदियाको विनाश उनीहरूले खोजीरहेको "चिन्ह" हो। तर तिनीहरू गलत थिए, र येशूले तिनीहरूको त्रुटि औंल्याउनुभयो। ऊ भन्छ: «यदि कसैले तपाईंलाई भन्यो: हेर, ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ! वा त्यहाँ!, तपाईंले यो विश्वास गर्नु हुँदैन » (मत्ती 24,23।।) यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न? यसबारे चेलाहरूले के सोच्नु पर्छ? तपाईंले आफैलाई सोध्नु भएको होला: हामी यसको उत्तरको लागि विन्ती गर्दैछौ कि ऊ कहिले आफ्नो राज्य स्थापना गर्ने छ, हामी उहाँलाई बिन्ती गर्दैछौं कि हामीलाई त्यसको संकेत हो, र उसले केवल अन्त कहिले आउँदैन भनेर कुरा गर्छ र चीजहरूको नाम राख्छ जुन चिन्ह जस्तै देखिन्छ तर छैनन्।
यद्यपि, उहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई बताउनुहुन्छ कि उहाँ कहिले आउनुहुनेछ, देखा पर्दैन। If त्यसोभए, यदि उनीहरूले तपाईंलाई यसो भन्यो: हेर, उहाँ उजाडस्थानमा हुनुहुन्छ! हेर, उहाँ घर भित्र हुनुहुन्छ! (24,26)। उहाँ यो स्पष्ट पार्न चाहानुहुन्छ कि चेलाहरू बहकाउनुहुन्न, न कि विश्व घटनाहरूद्वारा वा न त मानिसहरूले अन्तको चिह्न आइसकेका थिए भनेर ठानेका मानिसहरूले। सायद उहाँ तिनीहरूलाई यो कुरा भन्न चाहानुहुन्छ कि यरूशलेम र मन्दिरको पतनले अझै "अन्त" घोषणा गर्दैन।
अब पद २।। यहाँ येशूले अन्तमा चेलाहरूलाई आफ्नो आगमनको "चिन्ह" को बारेमा कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, अर्थात्, उहाँ तिनीहरूको दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। सूर्य र चन्द्रमा अँध्यारो हुनु पर्छ, र stars तारा » (सायद धूमकेतु वा उल्का पिण्ड) लाई आकाशबाट झर्ने भनिएको छ। सम्पूर्ण सौर्यमण्डल हल्लाएको छ।
अन्तमा, येशूले चेलाहरूलाई "चिह्न" भनेर बोलाउनुहुन्छ जसलाई तिनीहरू पर्खिरहेका छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ: «र तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ। तब पृथ्वीका सबै लिes्गहरू रूनेछन् र मानिसको पुत्रलाई आकाशको बादलमा आउँदै गरेको महान् शक्ति र महिमाका साथ देख्नेछन्। (24,30)। तब येशूले चेलाहरूलाई अन्जीरको रूखको एउटा दृष्टान्त सिक्न भन्नुभयो (24,32-34)। चाँडै नै हाँगाहरू नरम हुने र पातहरू बग्ने बित्तिकै, तपाईंलाई थाहा छ ग्रीष्म comingतु आउँदैछ। «साथै: यदि तपाईंले यी सबै देख्नु भयो भने, जानुहोस् उहाँ ढोकाको नजिक हुनुहुन्छ। (24,33)।
"यी सबै" - यो के हो? के यो युद्ध र भूकम्प र अनिकाल यहाँ र त्यहाँ छ? होईन यो मात्र श्रमको सुरुवात हो। "अन्त" भन्दा पहिले अरु धेरै समस्याहरू छन्। के यो सबै झूटा अगमवक्ताहरूको उपस्थितिको साथ सुसमाचार प्रचार गर्दै अन्त हुन्छ? फेरि, होईन। के यी सबै कुरा यरूशलेमको आवश्यकता र मन्दिरको विनाश मार्फत पूरा भएको छ? होईन त्यसोभए तपाईले "यी सबै" अन्तर्गत संक्षेप गर्नु पर्ने के हो?
हामी जवाफ दिनु अघि, अलि डिग्रस, प्रेरित चर्चले केहि सिक्नु पर्ने कुराको आशंका थियो र जसको बारेमा सिनोप्टिक सुसमाचारले बताउँदछ। 70० मा यरूशलेमको पतन, मन्दिरको विनाश र धेरै यहूदी पूजाहारीहरू र प्रवक्ताहरूको मृत्यु (र केही प्रेषितहरूले पनि) चर्चलाई कठोर पार्नुपर्दछ। यो घटना निश्चित छ कि येशू यी घटनाहरू तुरुन्तै आउनुहुनेछ भनेर चर्चले विश्वास गरेका थिए। तर तिनी टाढा बसे र यसले केही इसाईहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको हुनुपर्छ।
अब, हो निश्चय पनि, सुसमाचारका पुस्तकहरूले देखाउँदछ कि यरूशलेम र मन्दिरको विनाश भन्दा पनि येशू फर्किनु भन्दा पहिले अझ बढी गर्नुपर्दछ वा गर्नुपर्दछ। यरूशलेमको पतन पछि येशूको अनुपस्थितिबाट, चर्च उनको बहकाइएको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेन। तिनै synopics चर्चको शिक्षा दोहोर्याउँदछ: जब सम्म तपाईं स्वर्गमा देखा पर्नुहुनेछ मानिसको पुत्रको "चिन्ह", उहाँ पहिले नै आइसकेको छ वा चाँडै आउनेछ भनेर भन्छन् जसले सुन्नुहोस्।
कसैलाई पनि यस घण्टाको बारेमा थाहा छैन
अब हामी मत्ती २ 24 को संवादमा येशू व्यक्त गर्न चाहेको मूल सन्देशमा आइपुगेका छौं। मत्ती २ 24 का उनका शब्दहरू कम भविष्यसूचक छन्, बरु ती इसाई जीवनको बारेमा सिकाइएको भनाइ हो। मत्ती २ 24 हो, येशूका चेलाहरूलाई यो चेतावनी हो: सँधै आध्यात्मिक तवरमा तयार हुनुहोस्, किनकि तपाईंलाई थाँहा छैन र म कहिले आउनेछु भनेर जान्नुहुन्न। मत्ती २ 25 का उखानहरूले उस्तै आधारभूत सन्देशलाई चित्रण गर्दछन्। यो स्वीकार गर्दै - त्यो समय अज्ञात छ र बाँकी छ - एक स्ट्रोकमा मत्ती २ around वरिपरि धेरै गलतफहमीहरू हटाउँछ। यस अध्यायले भन्छ कि येशू "अन्त" वा उहाँको आगमनको ठ्याक्क समयको बारेमा कुनै भविष्यवाणी गर्न चाहनुहुन्न। "वाच" को अर्थ हो: निरन्तर मानसिक रूपमा जागा रहनुहोस्, सधैं तयार रहनुहोस्। र हैन: विश्व घटनाहरूको ट्र्याक राख्नुहोस्। एक "जब" भविष्यवाणी दिइएको छैन।
पछिल्लो इतिहासबाट देख्न सकिन्छ, यरूशलेम वास्तवमै धेरै अशान्तिपूर्ण घटनाहरू र घटनाहरूको केन्द्रबिन्दु थियो। १० 1099 मा, उदाहरणका लागि, क्रिश्चियन क्रुसेडरहरूले शहरलाई घेरा हाले र सबै बासिन्दाहरूको हत्या गरे। पहिलो विश्वयुद्धमा, बेलायती जनरल एलेन्बीले शहर कब्जा गरे र यसलाई तुर्की साम्राज्यबाट अलग गरे। र आज, हामी सबैलाई थाहा छ, यरूशलेम र यहूदियाले यहूदी-अरब द्वन्द्वमा केन्द्रीय भूमिका खेल्छन्।
सारांशमा: जब चेलाहरूले अन्तको "कहिले" भनेर सोधे, तब येशूले जवाफ दिनुहुन्छ: "तपाईंलाई यो थाहा छैन।" एक कथन जुन पचाउन पक्कै गाह्रो थियो। उनको पुनरुत्थान पछि, चेलाहरूले उहाँलाई अझै प्रश्नहरू सोधे: "प्रभु, के तपाईं यस समयमा इस्राएलको लागि राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ?" (प्रेरित १:)) फेरि येशू जवाफ दिनुहुन्छ: "पिताले आफ्नो शक्तिमा निर्धारित गर्नुभएको समय वा घण्टा थाहा पाउनु तपाईको अधिकार होइन ..." (पद १ 7)
येशूको स्पष्ट शिक्षाको बावजुद मसीहीहरूले सबै चोटि प्रेरितहरूको गल्ती दोहोर्याए। "अन्त" को समयको बारेमा बारम्बार अनुमानहरू जम्मा भए, येशूको पुन: आगमन तुरुन्तै भविष्यवाणी गरिएको थियो। तर ईतिहासले येशूलाई सही र गलत बनाएको छ हरेक संख्याका लागि जागल। एकदम सरल: "अन्त" कहिले आउँछ हामी जान्दैनौं।
अब येशू फर्कने पर्खाइमा हामीले के गर्नुपर्छ? येशूले चेलाहरूलाई जवाफ दिनुहुन्छ, र जवाफ पनि हामीलाई लागू हुन्छ। उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: “यसकारण हेर्नुहोस्। किनभने तपाईलाई थाहा छैन कुन दिन तपाईको प्रभु आउनु हुन्छ ... त्यसैले तपाई पनि तयार हुनुहुन्छ! किनकि मानिसको पुत्र एक घडीमा आउँदछ जब तपाईं यसको मतलब हुनुहुन्न » (मत्ती १०: १ -24,42 -२०) "विश्व घटनाहरू अवलोकन गर्दै" भन्ने अर्थमा सचेत हुनुको मतलब यहाँ छैन। "हेर्नु" भनेको परमेश्वरसँगको इसाई सम्बन्धलाई जनाउँछ। ऊ सधैं आफ्नो सृष्टिकर्ताको सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ।
अध्याय २ and र अध्याय २ of को बाँकीमा, येशूले त्यसपछि "संरक्षक" भनेको के हो भनेर वर्णन गर्दछ। विश्वासी र दुष्ट नोकरको उखानमा उनले चेलाहरूलाई सांसारिक पापहरूदेखि जोगिन र पापको आकर्षणले डराउन नदिन हौसला दिन्छ (24,45-51)। नैतिक? येशू भन्नुहुन्छ कि खराब नोकरको मालिक "उसले आशै नगरेको दिन आउनेछ, र उसले नजान्ने घण्टामा" (24,50)।
यस्तै प्रकारको शिक्षा बुद्धिमानी र मूर्ख कुमारीहरूको दृष्टान्तमा बताइएको छ (25,1-25)। केहि कुमारीहरू तयार छैनन्, बेहुली आउँदा "जागृत" छैनन्। तपाइँ साम्राज्यबाट बाहिर हुनुहुन्छ। नैतिक? येशू भन्नुहुन्छ: “यसकारण हेर! किनकि तपाईलाई न त दिन थाहा छ न घण्टा » (25,13)। येशूलाई सुम्पिएको कामदारहरूको उखानमा, येशू आफैंलाई एक यस्तो व्यक्तिको रूपमा बोल्नुहुन्छ जो एक यात्रामा जान्छन् (25,14-30)। ऊ सायद फर्किनु अघि स्वर्गमा बसेको बारेमा सोचिरहेको थियो। नोकरहरूले अब विश्वासिलो हातहरूमा सुम्पिएको प्रबन्धन गर्नुपर्दछ।
अन्तमा, भेडा र बाख्राको उखानमा, येशू आफ्नो अनुपस्थितिमा चेलाहरूलाई दिइएका पशुपूज्य कार्यहरूको कुरा गर्नुहुन्छ। यहाँ उनले उनको ध्यान "जब" बाट आउँदछ कि आउँदै गरेको उनको अनन्त जीवनको लागि आउने परिणामहरुमा। उसको आगमन र पुनरुत्थान भनेको उनीहरूको इन्साफको दिन भन्ने गरिन्छ। त्यो दिन जब येशू भेडाहरू हुनुहुन्छ (उसका साँचो उत्तराधिकारीहरू) बाख्राबाट (दुष्ट गोठालो) अलग।
दृष्टान्तमा, येशू आफ्ना चेलाहरूको शारीरिक आवश्यकताको आधारमा प्रतीकहरूको साथ काम गर्नुहुन्छ। जब उहाँ भोकाएको थियो, तिनीहरूले उसलाई भोजन दिए, तिर्खाएको बेला पिउन दिए, अपरिचित भएको बेलामा उनलाई भित्र लगे, ना naked्गो भएको बेला उसलाई लुगा लगाइदिए। चेलाहरू चकित भए र भने कि तिनीहरूले कहिल्यै उहाँलाई खाँचोमा परेका छैनन्।
तर येशू गोठालाहरूका गुणहरू स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्थ्यो। «साँच्चै, म तिमीलाई भन्छु: यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई तपाईंले जे गर्नुभयो, त्यो तपाईंले मलाई गर्नुभयो» (25,40)। जो येशूको भाइ हो उसको एक साँचो उत्तराधिकारी। त्यसकारण येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफ्नो बगाल - आफ्नो मण्डलीको राम्रो भण्डारे र गोठालो बन्न आज्ञा गर्नुहुन्छ।
यसरी येशू आफ्ना चेलाहरूको तीन प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ भनेर लामो भाषण छ: यरूशलेम र मन्दिर कहिले नष्ट हुन्छ? उसको आगमनको “चिन्ह” के हुनेछ? "विश्व समयको अन्त्य" कहिले हुन्छ?
मन्दिरको भवनहरू भत्काइनेछ भन्ने सुनेर चेलाहरू छक्क परे। तिनीहरू यो सोध्नुपर्दछ कि यो कहिले हुन्छ र कहिले "अन्त" र येशू "आउँदैछ"। मैले भनेझैं सबै सम्भावनामा तिनीहरूले येशू मसीहको सिंहासनमा चढ्ने आशा गरे र परमेश्वरको राज्यलाई आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र महिमाका साथ सुरु गरोस् भनेर भने। येशू यस सोच्ने तरिका विरुद्ध चेतावनी दिन्छ। "अन्त" भन्दा अघि ढिलाइ हुनेछ। यरूशलेम र मन्दिर ध्वंस हुनेछ, तर चर्चको जीवन चलिरहनेछ। इसाईहरूको सतावट र यहूदियामा भय terrible्कर कष्टहरू आउनेछन्। चेलाहरू छक्क परे। तिनीहरूले सोचेका थिए कि मसीहका चेलाहरूले तुरुन्तै ठूलो विजय हासिल गर्नेछन्, प्रतिज्ञा गरिएको देशमाथि कब्जा हुनेछ र साँचो उपासना पुनर्स्थापित हुनेछ। र अब मन्दिरको विनाश र विश्वासीहरूको सतावटको यी भविष्यवाणीहरू। तर त्यहाँ अन्य डरलाग्दो पाठहरू छन्। येशू आउनुहुने चेलाहरूले देख्ने एकमात्र "चिह्न" उहाँ आउनु भएको थियो। यो "चिन्ह" को सुरक्षा कार्य छैन किनकि धेरै ढिलो भयो। यी सबैले येशूको मूल सन्देशतर्फ डो or्याउँछ कि “अन्त” कहिले आउनेछ वा येशू कहिले आउनुहुनेछ भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन।
येशूले आफ्ना चेलाहरूको झूटा चिन्ता लिनुभयो र तिनीहरूबाट आध्यात्मिक शिक्षा लिनुभयो। डीए कार्सनको शब्दमा: “चेलाहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिइन्छ र पाठकलाई प्रभुको आगमनको प्रतिक्षा गर्न र मालिकको टाढा रहुन्जेल जिम्मेवार, विश्वासयोग्य, मानवीय र साहसी भई बस्न प्रोत्साहन दिइएको छ। (२.24,45..25,46-२XNUMX..XNUMX) » (आइबिड।, पृ। 495))